ခင်မင်းဇော်: ရန်ကုန်ရောက် မိုးသီးဇွန်သို့အရေးပေါ် အကြောင်းကြားစာ
( အောင်ဝေး )
Posted by ခင်မင်းဇော် at 2:11 PM
ကောင်းတယ် ပြန်ခေါ်လိုက် ပြန် ပြန် :D
စိတ်ကုန်ဖွယ် အတိပြီးသော ကဗျာမမည်၊ စာလဲမပီတဲ. အရေးအသားတွေနဲ.၊
ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာမှအဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ. အသံကောင်းဟစ်နေကြတယ်။
ကိုယ်.ဟာကို လွတ်ရာကျွတ်ရာမှာ အေးအေးသာနေပါတော.။
နဂိုထဲက ဘာမှလဲမဟုတ်ခဲ.ဘဲနဲ.များ ..... အံ.သြစရာ
မင်းကိုနိုင်ကို လူတွေစော်ကားကြသလား၊ ကိုကိုကြီးကို လူတွေ စော်ကားကြသလား၊ ဒေါ်မာမာအေးပြန်လာရင် လူတွေစော်ကားကြမလား။ ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး ပြန်ရှင်ပြီး ဒီကို ပြန်လာရင် လူတွေ စော်ကားကြမလား။ သမိုင်းအမည်းစက် မရှိရင် ပြန်လာတဲ့လူကို လက်ကမ်းမကြိုဆိုနိုင်စရာ မရှိပါဘူး ဦးအောင်ဝေးရယ်။ ခင်ဗျားပြန်မလာလည်း ရှိနေတဲ့လူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားထက် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ (ကိုရင်လက်ဆင်း)
ဘာများလဲဖတ်မိပါတယ် ဖတ်ပြီးတော.မှ တ၀က်တပျက် မှာတင် စိတ်ပျက်စရာကောင်းလို.ပြီးအောင်မဖတ်လိုက်တော.ပါဘူး။
အချိန်မရလို့ ကဗျာကိုအစအဆုံးတော့ မခံစားပေးလိုက်နိုင်တာဆောရီးပါ။ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ မြန်မြန်ပြန်ခေါ်သွားပေးဘို့ကိုတော့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါသည်။ ကျေးဇူး။
Whatsoever, Ko Moe Thee is one of news makers for modern history of Myanmar.
မိုးသီးဇွန် မြန်မာလူမျိုးဆိုတာတောင် မြန်မာတွေကိုယ်စားရှက်လိုက်တာ...မြန်မာဆိုတဲ့သွေးတွေ ဖောက်ထုတ်ပြီး အမေရိကန်သွေးတွေ သွင်းလိုက်ပါလား...ခွေးလောက်တောင် သစ္စာမရှိတဲ့ကောင်တွေပဲ..
Kyaung Khway,Do you know yourself also? If you don't know answer is you are Nothing!!!!!to Burma
၈၈ သမိုင်းမှာ မင်းဟာလည်း ကြယ်နီတစ်ပွင့်...,
အနုနဲ့အကြမ်း ထိခါစတော့ ငြိ ,ကြစမြဲဘဲ၊
မင်း ဆွဲဖွင့်ခဲ့ ...,
ကြယ်နီတစ်ပွင့် ဟာ ၈၈ သမိုင်းကို
ဒိထက်ပို အရောင်တောက်ပစေနိုင်မယ်ဆိုတာ ငါယုံကြည်တယ်..,
ကိုသူရ ထောင်ထွဲက ထွက်လာတော့
ပြည်သူတွေ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုလိုက်တာ
ဘယ်သူမှ ရီးပဲ လို့ မပြောဘူး၊
ခင်ဗျာ ကဗျာတွေ ရွတ်တယ်
အေးပါ ခင်ဗျာ မပြန်လာပါနဲ့
ခင်ဗျာက ရီးပဲ ဆိုရင်
ကွန်မန့်ပေးသွားသူ အများစုကို ကြည့်ရတာ
မိုးသီးကို အလုပ်သဘောအရ နာမည်ဖျက်သူ
မိုးသီးလို နာမည်မဖေါ်ရဲသူတွေ အများစုပါလား
ငါ နာမည်ဖေါ်ပြောလည်း ခွေးတွေလို ဝိုင်းကိုက်ကြအုံးမှာ
ဒီတော့ ပြောချင်တာက ..
အားလုံး ငတုံးတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောထားချင်တယ်
မင်းတို့လို အခြေအမြစ်မရှိ အပုတ်ချတာကို
သိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသူတွေ သိရင် တော်ပြီ။
ေေေ>>>မနာလိုရအောင်...မိုးလီးဆိုတဲ့ကောင်က ဘယ်ဘ၀ရောက်နေလို့လဲ??? မင်းသတ္တိရှိရင် မင်းနာမည်ဖော်ရဲရင် ဖော်ကြည့်လိုက်ပါလား။ ဘာအဆင့်မှမရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသားယောင်ယောင်...သူရဲကောင်းယောင်ယောင်တွေကို အလိုမရှိဘူး။ ငါတို့က အပေါစား ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ အော်ချင်တိုင်းအော်၊ ဆဲချင်တိုင်းဆဲရအောင် မြန်မာပြည်မှာ နေနေတာမဟုတ်ဘူး...မအေလိုး..မင်းတို့လို လူမျိုးတွေရှိနေလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတာ..မိုးသီးဆိုတဲ့ကောင် ငါ့လို သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို မှီဖို့ နောက်ထပ်လေးနှစ်လောက် ပညာသင်လိုက်ဦးလို့တောင် စိန်ခေါ်လိုက်ဦးမယ်...မအေလိုး ခွေးသားတွေ.
မိုးသီးကို သိတော့..ငါတို့ကို မိုးသီးက ထမင်းကျွေးပြီး ဖူးဖူးမှုတ်ပေးမလို့လား။ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတာ။ မင်းတို့လို ဟိုကရ၊ ဘယ်ကရဆိုတဲ့ သူတောင်းစားဆန်ဆန် ငွေကြေးနဲ့ အခန့်သားနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားနေတာ။ မိုးသီးခြေရာက ခွေးခြေရာသာသာလောက်ပဲရှိတာကို ငါတို့လို လူတွေက တိုင်းပေးရဦးမှာလား။ မိုးသီးကို နာမည်ဖျက်နေတာမဟုတ်ဘူး. အစကတည်းက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခံထားရတာ။ မိုးသီးနာမည်ဖော်တော့ ငါတို့က ထိုင်ကတော့ရမှာလား..လီးပဲ။ မင်းတို့ကောင်တွေ သေနတ်ပြောင်းဝနဲ့ပဲတန်တယ်..ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ခွေးလည်ပင်းက လည်ပတ်လောက်တောင် မင်းတို့အတွက် တန်ဖိုးမရှိဘူး..ခွေးသခိုးတွေရဲ့
“ မြန်မာ့ဒေါသ ကမ္ဘာက သိအောင်၊ ကျွန်တော်တို့မပြတော့ပြီ...”(၀တ်မှုန်)http://www.moemaka.blogspot.sg/
Artists are so emotional and openly expose own properties in everywhere. (i.e. Ko Zaganar, Ko Aung Way)
Art originally means "finesse" but now became "rudeness" by them.
သူရဲကောင်းနေနေသာသာ သူတောင်းစားလောက်တောင် လေးစားပေးလို့မရပါ။
အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်လိုပဲ။ မိုးသီးကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥပဓိရုပ်နဲ့ လုပ်ရပ်ကို က မြန်မာ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အဆင်မရှိလို့ ဆောရီး ပါ ကိုအောင်ဝေး ။ ခင်ဗျား ကို တခုပြောချင်တယ်ဗျာ။ ဦးသန့်ကျွန်းကို မသွားပါနဲ့လား ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ မတန်ပါဘူး။
မိုးသီးဇွန်တောင်းထားတဲ့ဟာတွေ ဦးအောင်ဝေးနဲ့မျှစားထားတာထင်တယ် ပြန်ခေါ်သွား ပြန်ခေါ်သွား ရီးတွေများနေရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲစားလိုက်ကြ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ ဆာလောင်နေကြတယ်မလား
ကဲ...ကိုမိုးလီးရေ...လူ (၁၀) ဦးမှာ (၁) ဦးတောင် ခင်ဗျားကို အလိုမရှိဘူးဆိုတာ..ဒီနေရာလေးကတောင် သက်သေပြနေပြီ...သန်း (၆၀) ထဲကဆိုရင်တော့..ကိုမိုးလီးကို အလိုရှိတဲ့သူ (၆) ယောက်လောက်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်. သိပ်ပြီး အရူးဘုံမြောက်မနေနဲ့..ခင်ဗျားကို လာကြိုဖို့ လိမ်းထိပ်က ဆိုက်ကားသမားကို ပိုက်ဆံပေးပြီးငှားထားတာ လူတိုင်းသိတယ်...ဟား ဟား
အောင်ဝေး ရေ --- မင်းရေးခဲ့တဲ့ကဗျာတွေက စိတ်ကူးယဉ် မိန်းမတစ်ယောက်မှာ လမ်းဆုံးသွားခဲ့တာကိုများ နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာစာရင်းဝင်ချင်နေသေးတာလား---။ ပိုင်ပြီဆိုပြီး ၀င်ကြောင်ပြီးတော့ အဖမ်းခံရမှာစိုးလို့ ကြွက်လို ဂယ်ပေါက် က ထွက်ပြေးသွားပြီးမှ အသံကောင်းဟစ်မနေပါနဲ့။ အနေချောင်အောင်၊ ပိုက်ဆံတောင်းလို့ကောင်းအောင် နေနေတဲ့ မင်းတို့တွေကို ရွံလွန်းလို့။ မင်းထွက်သွားပြီး ဒီမိုကရေစီအတွက် ဘာများ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ။ တစ်ကိုယ်ရေ ရပ်တည်မှုအတွက် ဟန်ဆောင် မုသာဝါဒတွေနဲ့ နေနေရတာ လိပ်ပြာလုံလို့လား။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ တိုင်းပြည်က ထွက်သွားတာ ဘယ်လောက်ထိ အရာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းအမြင်ပဲ။ မင်းတို့တွေ အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ လေထဲမှာတောင် တော်လှန်ရေးပီပြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့လား။ သေဖော်လှမ်းညှိမနေနဲ့။ မြန်မာပြည်သူတွေက ရန်/ငါ ပြတ်ပြီးသား။ မင်းကသာ စပျစ်သီးချဉ်နေတာ။ နေလိုက်တော့အောင်ဝေး။ အချင်းချင်း အမြီးဖြတ်ပြီးတော့သာ အပြင်ကနေ အူနေလိုက်တော့ အူဝေး---။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်ဝေးးး မြန်မြန်သာပြန်ခေါ် သွားပါ ရုပ်ကြီးမြင်ရတာကိုကကြက်သရေမရှိတဲ့အထဲ သောက်စကားပြောတာကြားတော့ပါးရိုက်ချင်စိတ် ပေါက်တယ် .. လုပ်စားကောင်းအောင် သိပ်အူပြမနေပါ နဲ့ .. အမြန်သာပြန်ခေါ်ပါတော့
တကယ်တော့ အောင်ဝေးက အရူးကြီးပါဗျာ။
အာလ၀ီး>>>>မင်းအမေနဲ့ မင်းညီမ/အစ်မတွေကို နတ်ကန္နားပေးပြီး ဖာတန်းပို့လိုက်ပါလား..ဖာတန်းမှာ နင့်အမေနဲ့ ညီမ/အစ်မကို မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အလာဟို အရှင်မြတ်က စောင့်နေတယ်။
Stupidest and funniest poem what I ever heard and the craziest poet has no brain. You all are living outside Myanmar for so long. Although you all always shouting to proect and save Myanmar people , no result yet. What I understand is you all are always trying to get great opportuniteis for yourselve and your family from the west social organizations.That's why, you all ever close eye on every good thing happening in Myanmar. You all don't want to criticise correctly. You all are always worry about cannot get the opportunies if you say true and good thing about current Myanmar. You all are fuck buggers. If you dare , you come back to Myanmar and try to survive in Myanmar whatever condition and try goodthing for myanmar people.
Mg Mg Singapore said...
ကဗျာလေးကြိုက်တယ်ဗျာ ... အော် အာလ၀ီးး ရေးတဲ့ကဗျာပြောတာပါဗျာ .. ရီးအောင်ဝေးေ၇းတဲ့ကဗျာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
My first comment is deleted. Here I write again.
This is the stupidest and funniest poem what I ever heard. The craziest poet has no brain. You all are staying outside Myanmar for so long and what I understand is you all don't want to criticise what is happening correctly. Every event has good thing and bad thing. Should be fair. What I notice is you all are always shouting to protect and save Myanmar people , but no result yet. You all are always writing all event happening in Myanmar are created by government,but you should know all of the people are not kid and not like as your bugger. We have to work hardly for our life.You all are always trying to get supports and money for yourselve and your family from the west social organizations.That's why, you all every close eye on good thing happening in Myanmar .You all never think about Myanmar people.You all are fuck buggers. What I believe is if you dare you must come over to Myanmar in whatever condition and do good thing for Myanmar people. I am sure you all don't want to struggle in difficult life in Myanmar and you all don't want to earn money for your life by doing simple job as normal Myanmar people.
အရင်ကတော့ ၈၈ပြည်ပရောက်မျိုးဆက်တွေအားလုံး ကိုလေးစားပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ရခိုင်အရေးဖြစ်အပြီးမှာ ဒီပြည်ပြေးအားလုံးကို ပြည်ပြေးတွေလို့ပဲ သတ်မှတ် လိုက်တော့တယ် .. အားလုံးတော့မဆိုလိုပါဘူးး တော်တော်များများပေါ့ အထူးသဖြင့် voa ,bbc တွေ ကပြည်ပြေးတွေပေါ့လေ
ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ထင်တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီလောက်ရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတွေဟာ အသိမိတ်ဆွေတောင်လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူး
Zizawars ရဲ့ကဗျာကတော့ အပီပြင်ဆုံးပဲ။
အပေါ်က ငါ့စကားနွားရ မှတ်ချက်အခု ၃၀ လောက်ဟာ ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ မြောင်းထဲရောက်ကုန်ပြီ။
မိုးသီးဇွန်တို့ မင်းကိုနိုင်တို့ဆိုတာ ၈၈ ကတည်းက သမိုင်းကွေးခဲ့တဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ရှေ့ဆုံးကနေ အပ်တစ်ချောင်းမပါပဲ ရင်ကော့ပေးခဲ့သူတွေ။
အဲဒါကို Anonymous နံမည်ပျောက်လေးတွေနဲ့ ကျားမြီးကို မရဲတရဲ ဆွဲသလိုလုပ်နေရင်တော့ .. ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် .. ဟေ့.. ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် .. တဲ့။